सरकारले संविधानसभाको ३ महिना म्याद थप्नका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई ने.क.पा. (मसाल)ले स्वागत गर्दछ । सर्वोच्च अदालतले जेष्ठ १४ भन्दा बढी संविधानसभाको म्याद थप्न पाईंदैन भनेर दिएको फैसलालाई हाम्रो पार्टीले त्यहीबेला समर्थन गरेको थियो । अहिलेको फैसला पहिलेको फैसला अनुरुप भएको हुनाले त्यो सही छ ।
वास्तवमा संविधानसभाले समयको कमी भएर संविधानको निर्माण गर्न नसकेको होइन । जुनबेला सर्वोच्चले जेष्ठ १४ गतेभन्दा बढी संविधानसभाको म्याद थप्न पाइदैन भनेर फैसला गरेको थियो, यो बेला पनि संविधानको निर्माणको लागि छ महिनाको पर्याप्त समय थियो । तर त्यो अवधिमा पनि संविधानको निर्माणको काम हुन सकेन । त्यसका लागि समयको कमीभन्दा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको गैर�जिम्मेवार भूमिका नै बढी जिम्मेवार रहेको कुरा प्रष्ट छ ।
उपरोक्त प्रकारको अवस्थामा अहिले प्रस्तावित गरिए अनुसार संविधानसभाको म्याद थपिए पनि संविधान बन्न नसक्ने कुरा निश्चित छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको म्याद थप्ने कुराको औचित्यतालाई अश्वीकार गर्दै आएको छ र अहिले पनि अस्वीकार गर्दछ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको म्याद थप्नेपट्टि नलागेर जेष्ठ १४ भित्र नै संविधानको निर्माण गर्ने वा कुनै विकल्पमा जाने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यस अनुसार हाम्रो पार्टीले निम्नलिखित २ वटा विकल्पमा जोड दिन्छ ः १. अहिलेसम्म भएको सहमतिका आधारमा संक्षिप्त प्रकारको भएपनि संविधानको निर्माण गरेर जेष्ठ १४ गते नै जारी गर्ने र बा�की कामको जिम्मा रुपान्तरित संसदलाई दिने । २. जेष्ठ १४ गतेभित्र संविधान जारी हुन नसकेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार कुनै विकल्पमा जाने ।
उक्त दुवै विकल्प बाहेक अन्य बाटो समात्ने प्रयत्न गरिएमा त्यसले देशलाई अस्तव्यस्ततातिर लैजाने छ र त्यसका कैयौं दुष्परिणामहरु हुनेछन् । त्यो अवस्थामा देश प्रतिगमनतिर जाने, देशमा अराजकताको स्थितिको सिर्जना हुने वा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन पनि खलबलिने सम्भावना रहने छ । त्यसका साथै यो वास्तविकताबाट पनि हामीले आफ्नो ध्यान हटाउन हुन्न कि जुन राजनीतिक शक्तिहरुका गैर�जिम्मेवार भूमिकाका कारणले ४ वर्षको लामो अवधिमा पनि संविधानको निर्माण हुन सकेन र देश अन्यौल, अनिश्चयता र संकटको मुखमा उभिएको छ, उनीहरुको त्यही प्रकारको भूमिकामा निरन्तरता रह्यो भने आउने दिनहरुमा पनि देशलाई अग्रगमनको दिशामा जान बाधा पुगिरहने छ र अहिले जस्तो जटिल र कठिन स्थितिको पुनरावृत्तिको सम्भावना रहने छ । जनताको उच्चस्तरको चेतना, सतर्कता र आन्दोलनको बलमा नै त्यस प्रकारको स्थितिको पुनरावृत्तिको सम्भावनालाई रोक्न सकिने छ । अहिले माथिका दुईवटा मध्ये पहिलो र नभए दोस्रो विकल्पमा गएर तात्कालिक समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरे पनि भविष्यमा अहिलेको जस्तो अनिश्चितता, अन्यौल वा संकटको स्थितिको पुनरावृत्तिको सम्भावनालाई रोक्नका लागि उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउन हामीले जनतासित अपील गर्दछौं ।
मिति ः २०६९ जेष्ठ १२ गते